ပှငျ့လငျးလှတျတျောအကွောငျး - Open Hluttaw
ပှငျ့လငျးလှတျတျော App အကွောငျး
ဇှနျ 14, 2016 sundew
ပှငျ့လငျးလှတျတျောဟာ ပွညျသူတှနေဲ့ သူတို့ရဲ့ လှတျတျောကိုယျစားလှယျတှကွေား အရေးပါတဲ့လုပျငနျးစဉျတဈခုဖွဈတဲ့ သတငျးအခကျြအလကျတှေ၊ အဆကျအသှယျတှကေို အမွဲတစရေရှိနိုငျအောငျ လှယျကူတဲ့နညျးလမျးတှနေဲ့အတူ ဆကျစပျပေးဖို့ လူ့အဖှဲ့အစညျးဆီကို ရောကျလာတဲ့ ရှပွေ့ေးဆောငျရှကျခကျြတဈခုဖွဈပါတယျ။
သငျတို့ရဲ့ လှတျတျောကိုယျစားလှယျဘယျသူလဲဆိုတာ ရှာဖှလေိုပါသလား?
သူတို့နဲ့ ပတျသကျတဲ့ အခကျြအလကျတှကေို စုံစမျးရှာဖှလေိုပါသလား?
ဒါမှမဟုတျ သငျစိတျဝငျစား အလေးထားနတေဲ့ ကျောမတီတဈခုမှာ ဘယျသူတှပေါဝငျနလေဲဆိုတာကို စုံစမျးလိုပါသလား?
ပှငျ့လငျးလှတျတျောက ရာနဲ့ခြီတဲ့လှတျတျောကိုယျစားလှယျတှရေဲ့ ကိုယျရေးအခကျြအလကျတှကေို ခပြွထားတဲ့အတှကျ သငျသိခငျြတဲ့လှတျတျောအမတျတှကေို ရှာဖှနေိုငျမှာ ဖွဈပါတယျ။
ပှငျ့လငျးမွငျသာမှုပိုမိုအားကောငျးစရေေးအတှကျ တဈဖကျတဈလမျးကကွိုးပမျးတဲ့ အစီအစဉျတဈခု
မွနျမာ့ပဉ်စမဏ်ဍိုငျ နဲ့ ပှငျ့လငျးမွနျမာ့ရှဆေ့ောငျ အဖှဲ့ တို့ကနေ စတငျမိတျဆကျပေးလိုကျတဲ့ ပှငျ့လငျးလှတျတျောဟာ မွနျမာနိုငျငံတဝနျးမှာရှိတဲ့ လူ့အဖှဲ့အစညျးအတှကျ တကျကွှလှုပျရှားသူတှေ၊ လူမှုအဖှဲ့အစညျးတှရေဲ့ နိုးကွားနတေဲ့ ပူးပေါငျးဆောငျရှကျမှုတဈခုအဖွဈ ရပျတညျ ဆောငျရှကျမှာ ဖွဈပါတယျ။ ပှငျ့လငျးလှတျတျောအတှကျ နညျးပညာပိုငျးကို Sundew Myanmar နဲ့ Sinar Project တို့နဲ့ ပူးပေါငျးဆောငျရှကျပွီး တညျဆောကျထားပါတယျ။
ပှငျ့လငျးလှတျတျောဟာ လကျရှိမှာ လူမှုအဖှဲ့အစညျးတှနေဲ့ဖှဲ့စညျးထားတဲ့ ဦးဆောငျကျောမတီ တဈခုနဲ့အတူ ပူးပေါငျးဆောငျရှကျလကျြရှိပါတယျ။ ပှငျ့လငျးလှတျတျော ဦးဆောငျကျောမတီထဲမှာပါဝငျပွီး ပူးပေါငျးဆောငျရှကျ လုပျကိုငျရနျအတှကျ စိတျဝငျစားပါသလား? contact@openhluttaw.org ကို အီးမေးလျပို့ပွီး ဆကျသှယျနိုငျပါတယျ။
ယခုလှငျ့တငျထားတဲ့ “ပှငျ့လငျးလှတျတျော”ဝကျဘျဆိုကျနဲ့ ထညျ့သှငျးထားတဲ့အခကျြအလကျတှေ၊ ဝကျဘကျဆိုကျမှာပါဝငျတဲ့ အသုံးပွုနိုငျမှုတှဟော တကယျတော့ အစပြိုးအဆငျ့ပဲရှိပါသေးတယျ။ ဆကျလကျပွီးတော့လညျး တိုငျးဒသေကွီးလှတျတျောကိုယျစားလှယျမြားရဲ့အခကျြအလကျမြားကို ထညျ့သှငျးပွီး သူတို့ကိုပွညျသူတှေ တိုကျရိုကျဆကျသှယျနိုငျတဲ့အထိ တိုးခြဲ့ဆောငျရှကျနိုငျဖို့အထိ ပွငျဆငျနပေါတယျ။
လောလောဆယျမှာ လှတျတျောကိုယျစားလှယျတှရေဲ့ ကိုယျရေးအခကျြအလကျတှကေို ဖျောပွသှားဖို့ပဲ ဖွဈပမေယျ့ ပနျးတိုငျအနနေဲ့ကတော့ ဒီကိုယျစားလှယျတှေ လှတျတျောထဲနဲ့လှတျတျောပွငျပမှာ နစေ့ဉျနှငျ့အမြှ သူတို့လုပျဆောငျနတေဲ့ ဆောငျရှကျခကျြတှေ၊ သတငျးတှကေိုပါ စဉျဆကျမပွတျပေါငျးထညျ့ ဖျောပွသှားဖို့ပဲ ဖွဈပါတယျ။
ဒါကွောငျ့ သငျ့အနနေဲ့ လှတျတျောကိုယျစားလှယျတဈယောကျ ဘယျအကွောငျးအရာထဲမှာ အမြားဆုံးပါဝငျပတျသကျနလေဲ? အဲ့ဒီအကွောငျးအရာပျေါမှာ သူတို့ရဲ့ အမွငျတှကေ ဘယျလိုလဲ? စတာတှအေပွငျ အစိုးရကို တငျသှငျးထားတဲ့ မေးခှနျးတှေ အဆိုတှကေို တဈနရောတညျးမှာ တဈစုတဈစညျးတညျး အလှယျတကူ ကွညျ့ရှုနိုငျတယျလို့ စိတျကူးကွညျ့လိုကျပါ။ ပှငျ့လငျးလှတျတျောဟာ ဒီအရာတှေ ( ဒီထကျမက အမြားကွီး၊ အမြားကွီး)ကို အမှနျတကယျဖွဈလာဖို့ ဦးတညျဆောငျရှကျနပေါတယျ။
သငျတှေးနသေလိုပါပဲ ဒါဟာ အခြိနျနဲ့ လုပျအားတှမြေားစှာ မွုပျနှံမှုတှပေါဝငျတဲ့ လုပျငနျးတဈခုဖွဈပါတယျ။ လာမယျ့လတှမှော ဒီထကျပိုမို ကောငျးမှနျတဲ့သတငျးတှကေို သငျတို့ထံ ဆောငျယူလာဖို့အတှကျ ပှငျ့လငျးလှတျတျောက ကွိုးစားလုပျကိုငျနတောကွောငျ့ ဆကျလကျနားစှငျ့ထားကွပါဦး။
အကယျ၍ ပှငျ့လငျးလှတျတျောရဲ့ လုပျငနျးတှကေို ပိုပွီး မွနျမွနျအကောငျအထညျပျေါစခေငျြတယျဆိုရငျတော့ သငျ့အနနေဲ့ ပါဝငျပူးပေါငျးနိုငျတဲ့ နညျးလမျးတှလေညျး အမြားကွီးရှိပါတယျ။ သငျ့မှာ တိုငျးဒသေကွီးလှတျတျောကိုယျစားလှယျတှရေဲ့အခကျြအလကျတှကေို ရှိပါသလား? သို့မဟုတျ ဒီအခကျြအလကျတှကေို စုစညျးပွုစုတဲ့ ဆောငျရှကျခကျြထဲမှာ ပါဝငျလိုပါသလား? contact@openhluttaw.org ကိုအီးမေးလျပို့ပွီး ဆကျသှယျနိုငျပါတယျ။
သငျတို့ထံမှ တုံ့ပွနျအကွံပွုခကျြတှကေို လှိုကျလှိုကျလှဲလှဲ ကွိုဆိုနပေါတယျ။
ပွင့်လင်းလွှတ်တော်ဟာ ပြည်သူတွေနဲ့ သူတို့ရဲ့ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေကြား အရေးပါတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ သတင်းအချက်အလက်တွေ၊ အဆက်အသွယ်တွေကို အမြဲတစေရရှိနိုင်အောင် လွယ်ကူတဲ့နည်းလမ်းတွေနဲ့အတူ ဆက်စပ်ပေးဖို့ လူ့အဖွဲ့အစည်းဆီကို ရောက်လာတဲ့ ရှေ့ပြေးဆောင်ရွက်ချက်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
သင်တို့ရဲ့ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဘယ်သူလဲဆိုတာ ရှာဖွေလိုပါသလား?
သူတို့နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ အချက်အလက်တွေကို စုံစမ်းရှာဖွေလိုပါသလား?
ဒါမှမဟုတ် သင်စိတ်ဝင်စား အလေးထားနေတဲ့ ကော်မတီတစ်ခုမှာ ဘယ်သူတွေပါဝင်နေလဲဆိုတာကို စုံစမ်းလိုပါသလား?
ပွင့်လင်းလွှတ်တော်က ရာနဲ့ချီတဲ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေရဲ့ ကိုယ်ရေးအချက်အလက်တွေကို ချပြထားတဲ့အတွက် သင်သိချင်တဲ့လွှတ်တော်အမတ်တွေကို ရှာဖွေနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ပွင့်လင်းမြင်သာမှုပိုမိုအားကောင်းစေရေးအတွက် တစ်ဖက်တစ်လမ်းကကြိုးပမ်းတဲ့ အစီအစဉ်တစ်ခု
မြန်မာ့ပဉ္စမဏ္ဍိုင် နဲ့ ပွင့်လင်းမြန်မာ့ရှေ့ဆောင် အဖွဲ့ တို့ကနေ စတင်မိတ်ဆက်ပေးလိုက်တဲ့ ပွင့်လင်းလွှတ်တော်ဟာ မြန်မာနိုင်ငံတဝန်းမှာရှိတဲ့ လူ့အဖွဲ့အစည်းအတွက် တက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေ၊ လူမှုအဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့ နိုးကြားနေတဲ့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတစ်ခုအဖြစ် ရပ်တည် ဆောင်ရွက်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ပွင့်လင်းလွှတ်တော်အတွက် နည်းပညာပိုင်းကို Sundew Myanmar နဲ့ Sinar Project တို့နဲ့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပြီး တည်ဆောက်ထားပါတယ်။
ပွင့်လင်းလွှတ်တော်ဟာ လက်ရှိမှာ လူမှုအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ ဦးဆောင်ကော်မတီ တစ်ခုနဲ့အတူ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါတယ်။ ပွင့်လင်းလွှတ်တော် ဦးဆောင်ကော်မတီထဲမှာပါဝင်ပြီး ပူးပေါင်းဆောင်ရွက် လုပ်ကိုင်ရန်အတွက် စိတ်ဝင်စားပါသလား? contact@openhluttaw.org ကို အီးမေးလ်ပို့ပြီး ဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်။
ယခုလွှင့်တင်ထားတဲ့ “ပွင့်လင်းလွှတ်တော်”ဝက်ဘ်ဆိုက်နဲ့ ထည့်သွင်းထားတဲ့အချက်အလက်တွေ၊ ဝက်ဘက်ဆိုက်မှာပါဝင်တဲ့ အသုံးပြုနိုင်မှုတွေဟာ တကယ်တော့ အစပျိုးအဆင့်ပဲရှိပါသေးတယ်။ ဆက်လက်ပြီးတော့လည်း တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များရဲ့အချက်အလက်များကို ထည့်သွင်းပြီး သူတို့ကိုပြည်သူတွေ တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်နိုင်တဲ့အထိ တိုးချဲ့ဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့အထိ ပြင်ဆင်နေပါတယ်။
လောလောဆယ်မှာ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေရဲ့ ကိုယ်ရေးအချက်အလက်တွေကို ဖော်ပြသွားဖို့ပဲ ဖြစ်ပေမယ့် ပန်းတိုင်အနေနဲ့ကတော့ ဒီကိုယ်စားလှယ်တွေ လွှတ်တော်ထဲနဲ့လွှတ်တော်ပြင်ပမှာ နေ့စဉ်နှင့်အမျှ သူတို့လုပ်ဆောင်နေတဲ့ ဆောင်ရွက်ချက်တွေ၊ သတင်းတွေကိုပါ စဉ်ဆက်မပြတ်ပေါင်းထည့် ဖော်ပြသွားဖို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါကြောင့် သင့်အနေနဲ့ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တစ်ယောက် ဘယ်အကြောင်းအရာထဲမှာ အများဆုံးပါဝင်ပတ်သက်နေလဲ? အဲ့ဒီအကြောင်းအရာပေါ်မှာ သူတို့ရဲ့ အမြင်တွေက ဘယ်လိုလဲ? စတာတွေအပြင် အစိုးရကို တင်သွင်းထားတဲ့ မေးခွန်းတွေ အဆိုတွေကို တစ်နေရာတည်းမှာ တစ်စုတစ်စည်းတည်း အလွယ်တကူ ကြည့်ရှုနိုင်တယ်လို့ စိတ်ကူးကြည့်လိုက်ပါ။ ပွင့်လင်းလွှတ်တော်ဟာ ဒီအရာတွေ ( ဒီထက်မက အများကြီး၊ အများကြီး)ကို အမှန်တကယ်ဖြစ်လာဖို့ ဦးတည်ဆောင်ရွက်နေပါတယ်။
သင်တွေးနေသလိုပါပဲ ဒါဟာ အချိန်နဲ့ လုပ်အားတွေများစွာ မြုပ်နှံမှုတွေပါဝင်တဲ့ လုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ လာမယ့်လတွေမှာ ဒီထက်ပိုမို ကောင်းမွန်တဲ့သတင်းတွေကို သင်တို့ထံ ဆောင်ယူလာဖို့အတွက် ပွင့်လင်းလွှတ်တော်က ကြိုးစားလုပ်ကိုင်နေတာကြောင့် ဆက်လက်နားစွင့်ထားကြပါဦး။
အကယ်၍ ပွင့်လင်းလွှတ်တော်ရဲ့ လုပ်ငန်းတွေကို ပိုပြီး မြန်မြန်အကောင်အထည်ပေါ်စေချင်တယ်ဆိုရင်တော့ သင့်အနေနဲ့ ပါဝင်ပူးပေါင်းနိုင်တဲ့ နည်းလမ်းတွေလည်း အများကြီးရှိပါတယ်။ သင့်မှာ တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေရဲ့အချက်အလက်တွေကို ရှိပါသလား? သို့မဟုတ် ဒီအချက်အလက်တွေကို စုစည်းပြုစုတဲ့ ဆောင်ရွက်ချက်ထဲမှာ ပါဝင်လိုပါသလား? contact@openhluttaw.org ကိုအီးမေးလ်ပို့ပြီး ဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်။
သင်တို့ထံမှ တုံ့ပြန်အကြံပြုချက်တွေကို လှိုက်လှိုက်လှဲလှဲ ကြိုဆိုနေပါတယ်။
ဤ ပှငျ့လငျးလှတျတျော အစီအစဉျတှငျ အောကျပါအဖှဲ့အစညျးမြား ပူးပေါငျးပါဝငျဆောငျရှကျကွပါသညျ။